ISOFTWARE YOYILO OLUPHAMBILI - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Isoftware yoYilo oluPhambili
Isoftware yoYilo oluPhambili
Apha ngezantsi sabelana ngesoftware yoyilo efanelekileyo yokukunceda wenze isicwangciso esisekwe kubume bekhaya lakho kunye neenkcukacha.
Ishedi inokuba luncedo ukongeza ekhayeni lakho ekugcineni izixhobo zegadi kunye nokugcina izinto zilungelelanisiwe kwaye zingabonakali. Unokhetho lokuthenga i-premade enye kodwa inokuba luncedo kwaye yahluke ekwenzeni uyilo lwakho unemilinganiselo echanekileyo engqondweni. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu oyila ubuchwephesha, eyenza inkqubo yoyilo ibe yinto edidayo kunye neyoyikisayo.
Iindaba ezimnandi zezokuba zininzi izicelo kunye nesoftware eyenziweyo ukunceda umndilili weempawu zoyilo lomninikhaya ezinje ngeeshedi kunye neegaraji. Eziapps zenzelwe ukukukhokela kwinkqubo yoyilo lokuphalaza ngamanqanaba ahlukeneyo enkcukacha.
Apha ngezantsi, siza kujonga ngakumbi ezinye zeefayile zakho isoftware yoyilo ukhetho.
Suite yoyilo lweKhaya
UMyili oLungileyo weDinkum Sheheds
Ishedyuli yeGaraji yeGaraji ye-3D
Ishedi yeCAD yesoftware
Isoftware yoyilo lasimahla kwi-Intanethi
Isoftware yoyilo lwe3D esimahla
Ishedi yoyilo lwesoftware enoluhlu lwezixhobo ezikwi-Intanethi
Isoftware yokuqala esiza kujonga kuyo yiSketchUp. Le software inika amandla okwenza iimodeli ze-3D kwizicelo ezahlukeneyo kubandakanya uyilo lwangaphakathi, uyilo, kunye noyilo lomdlalo wevidiyo. Injongo yale software kukuvumela ukuba wenze nantoni na onokuyicinga ngayo ukuya kwiinkcukacha ezintle.
Eli nqanaba leenkcukacha liza necala elisezantsi. Kuba zininzi izinto kunye nezixhobo, kunokubonakala kunzima ukuba uzame ukwazi isoftware. Ngelixa kunokuba nzima ukuba ujonge ukwenza into eneenkcukacha kakhulu, iziseko kulula ukuziqonda.
Ukuqala, uya kuyalelwa ngoxande olulula onokutsala ngalo ukuze wenze ubungakanani obufanelekileyo. Ubunzima bungena xa uzama ukongeza kwiinkcukacha ezinokuthi zibandakanywe ziingcali ezinje ngee-studs kunye ne-plywood. Okona kuninzi, usetyenziso lukukhokela kwimisebenzi ebalulekileyo ngendlela yenyathelo nenyathelo.
● Iimodeli ze-2D kunye ne-3D
● Ithala leencwadi elikhulu le-3D leemodeli ze-3D
● Ikuvumela ukuba ulawule iinkcukacha ezifana nokukhanyisa kunye nokuthungwa
● Gcina ngokuzenzekelayo kwaye ugcine ngesandla ukugcina iikopi ezihlaziyiweyo zesicwangciso sakho seshedi
● Isebenza kwiWindows nakwiMAC OS
● Uhlobo lwethebhulethi luyafumaneka kuzo zombini ii-iPhones kunye ne-Android
● Ifumaneka ngeelwimi ezili-10
● Uhlobo lwasimahla luyafumaneka
● Izifundo zevidiyo
● Uhlobo lwasimahla lomda weempawu ezinje njengokukwazi ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle iifayile
● Iingxaki zokubandiswa kunye nokuphazamiseka kwiifayile ezinzima
● Izicwangciso zingabelwana kuphela
Tyelela iSketchup iwebhusayithi
UMyili oyiNtloko ubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zesoftware kubathengi babo, enye yazo eyi-Suite Designer Suite. Le software iyinketho ye-3D eneempawu ze-2D, ikunika ulawulo ngakumbi kwiinkcukacha ezifanelekileyo zoyilo lwakho lweshedi. Yenzelwe abaqulunqi be-DIY abangenazo izakhono kunye noqeqesho lobungcali.
Oko bekutshiwo, kukho ijika lokufunda xa kuziwa kwi-Suite Designer Suite. Kuza nezixhobo ezininzi kunye nolawulo olunokuthatha ixesha ukufumana ukuxhoma.
Uyakufuna kwakhona ukuba ube nomonde kwisoftware kuba ayenzelwanga ukuza nombono okhawulezileyo kwishedi yakho. Qho xa uqala ukwenza isicwangciso esitsha yoyilo, kuya kufuneka uphendule uthotho lwezinto ezishukumisayo ezivela kwiWizard Builder Wizard. Oku kuyakuquka imibuzo malunga nobungakanani, isitayile, ukubonakala kwangaphandle, ukuyila okungagqibekanga, kunye nezinto ezinje. Iindaba ezimnandi zezokuba lo monde uyakuvuza uyilo oluneenkcukacha kunye noluncedo.
● Uyilo lomgangatho wobungcali
● Amawakawaka ezinto zethala leencwadi
● Iitemplates ezakhelweyo
● Uqikelelo lweendleko
● Ukhenketho lwe-3D ebonakalayo
● Iwaranti yokubuyiselwa imali yeentsuku ezingama-30
● Inokusetyenziswa ngeMac okanye iPC
● Ungagcina uyilo lwakho kwiLifu
Uhlobo lomtshato lweenwele ezimfutshane
● Iza ngendleko
● Igophe lokufunda elibalulekileyo
● Inokusetyenziswa kwikhompyuter enye ngexesha elinye
Funda ngakumbi kwi iwebhusayithi
I-Shed Boss yenye yesoftware eyenzelwe iiprojekthi ze-DIY kunye nabathengi bokuyila abazama ukucwangcisa into abayifunayo. Ngokungafaniyo nokhetho olufana neKhaya loMyili weKhaya, nangona kunjalo, i-Shed Boss App ichanekile. Ngaphandle kwegophe lokufunda, ungaqala ukwenza izicwangciso zeshedi yakho ngokukhawuleza.
Olu setyenziso lukukhokelela inyathelo ngenyathelo kwinkqubo yoyilo. Ukuqala, uya kukhetha ukhetho lokwenza ishedi kwaye inkqubo iqhubele phambili ukusuka apho. Insiza iya kukubuza imibuzo malunga neempawu ezifana nobukhulu kunye neentlobo zokwakha. Ngeke ukwazi ukutsiba ezi zinto njengoko zibalulekile ekwenzeni imodeli yokwenyani.
Izixhobo ezikolu hlelo lokusebenza zisisiseko kwaye zinokufumaneka kwicala lasekhohlo lesikrini sakho. Ungasondeza ngaphakathi nangaphandle kwisicwangciso sakho ngokucofa isikrini okanye usebenzisa ivili lokuhambisa kwimouse.
Le app, ngelishwa, ithengisa ukusebenziseka kwayo kukhetho olusisiseko lweempawu zoyilo.
● Kulula ukuyisebenzisa
● Kusimahla ukuyisebenzisa
● Iyafumaneka kwi-Intanethi, kuGoogle Play, nakwiVenkile yeApple
● Iimpawu zoyilo ze3D
● Ukongezwa kwenyani (AR) kukuvumela ukuba ubone ishedi yakho kwindawo yayo
● Imo yefoto ikuvumela ukuba ubambe umfanekiso weshedi yakho kwi-AR
● Unokwabelana ngezicwangciso zakho ngokuthe ngqo kuFacebook okanye kuTwitter
● Isoftware inikezela ngeengcebiso ngendawo yeshedi
● Iimpawu zoyilo ezinqunyelweyo
● Ayikwazi ukwenza ngokwezifiso
● Xa ufaka ubukhulu, amanani kuphela apheleleyo anakanwa angavumeli ukuba kubekho ukuchaneka okugqibeleleyo
Zama i-app ye-Shed boss kule iwebhusayithi
Uhlelo lokusebenza lwe-Fair Dinkum Sheds Designer lwenziwe, ngokungathandabuzekiyo, yi-Fair Dinkum Sheds. Le software yenzelwe uyilo lweeshedyuli kuphela kodwa kunye neebhari, iigaraji, kunye nezithuthi zemoto ngokunjalo.
Ngokufana ne-Shed Boss App, unokufumana amanqaku owadingayo kwicala lasekhohlo lesikrini. Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa uyisebenzisa kukuseta ubungakanani obunesixa esifanelekileyo sokwenza ngokwezifiso ukukuvumela ukuba uchane.
Zininzi izinto ezinolu hlelo lokusebenza kodwa azikho nzima ukufumana isiphatho. Ungazitshintsha iinkcukacha ezinjengemibala kunye nokubopha. Awunako ukusondeza ngaphakathi nangaphandle kwezicwangciso ezenziwe kule app kodwa ungatshintsha i-engile ojonge kuyo izicwangciso zakho ngokunqakraza kwaye utsale isikhombisi.
Le app ikwabonelela ngoqikelelo lweendleko kwimisebenzi kodwa abanye abasebenzisi bakhalaza ukuba babebiza kakhulu kunaleyo ezinye iisoftware ezibaxelele zona ngezicwangciso ezifanayo.
● Uyilo lwe3D
● Uninzi lweempawu zoyilo onokuzisebenzisa
● Ikuvumela ukuba wabelane ngendalo yakho nge-imeyile, i-Facebook kunye ne-Twitter
● Iyafumaneka kuGoogle Play nakwiVenkile yeApple
● Ayikwazi ukwandisa
● Abasebenzisi bazabalaze nenqaku loqikelelo lweendleko
Jonga ukhetho onokulukhuphela kubo iwebhusayithi
I-Udesignit 3D Garage Shed yinto yoyilo olusisiseko lokusebenza ukukunceda ucwangcise igaraji yakho yokuphupha okanye ishedi. Yenziwe ukuba ibe lula ukuyisebenzisa nakwabo bangakhange basebenze nangaluphi na uhlobo lwesoftware yoyilo ngaphambili.
Ukuba uyalahleka ngelixa usebenzisa isoftware ye-Udesignit 3D Garage Shed, imenyu yoNcedo sisixhobo esibalulekileyo. Izele ziingcebiso ezinokukunceda ekukhokeleni kwishedi yamaphupha akho. Abanye abasebenzisi bafumanise ukuba eminye imisebenzi enjengokubuyisa isenzo kunzima ukuyilawula.
Ukuqala kule software, kufuneka ukhethe kuphela inkqubo yunithi oyifunayo kwaye usete ubungakanani. Ukusuka apha, ungasebenzisa ii-icon ezifumaneka kwimiphetho yesikrini ukwenza ishedi yakho ngendlela oyifunayo.
● Uninzi lwezinto ezinje ngeefestile, umbala wepeyinti, uphahla kunye neengcango
● Inkalo yokuqikelela iindleko
● Iingcebiso ezivela kwimenyu yoNcedo zikukhokela kwinkqubo yoyilo
● Kunzima ukutshintsha izenzo
● Ukufakwa kwe-Android kunye ne-Iphone kuphela
Jonga kwivenkile yeApp iwebhusayithi
Isitudiyo senzelwe ngokukodwa ukuyila kunye nokuyila iishedi. Isoftware isimahla ukuyisebenzisa kwiwebhusayithi yabo kwaye ikukhokele ngenyathelo ngenyathelo kwinkqubo yoyilo.
Into yokuqala oza kuyibuzwa yikhowudi yakho ye-zip. Oku kuya kunceda iStudioshed ikunike uqikelelo oluchanekileyo lokwakha ishedi oyenzileyo. Emva koko, uya kukhetha ubungakanani beshedi yakho kodwa kukho ukhetho olunomda. Ukusuka apho, uya kukhetha ingaphakathi, ubume bangaphandle, ii-sidings, imibala, kunye neenkonzo kunye nesiseko seshedi. Nje ukuba ugqibile, iStudioshed iya kunika ingqikelelo yakho yokugqibela yeshedi yakho.
Kuyenzeka ukuba ujonge ishedi evela kwii-engile ezahlukeneyo ngokhetho olungezantsi kwemodeli kunye nokusondeza ngokuskrola.
● Uqikelelo lweendleko olukhawulezileyo
● Ukhetho lofakelo
● Iimpawu ezinqunyelweyo
● Hayi imodeli eneenkcukacha
Funda ngakumbi ngeShedyuli yokuThululwa kwabo iwebhusayithi
Ndiyakuthanda iikowuti zakhe
I-CADPro yenzelwe ukunceda abasebenzisi ukuba bacwangcise uyilo lwasekhaya kunye nokuphuculwa, benze izicwangciso zokulungisa umhlaba, kunye nokwenza uyilo loomatshini kunye nemizobo.
Isibonelelo esikhulu sale software ziindidi zeempawu ezikhoyo zokusetyenziswa. Ungaqala ngemilinganiselo echanekileyo ngoncedo oluvela kwi-Smart Dimensioning kunye neempawu ezizenzekelayo zeteyiphu. Unokufakela iifoto, wenze iifayile zebhodi eqhotyoshwayo, usebenzise izixhobo zokupenda, udibanise iOfisi yeMicrosoft, kwaye ugcine izicwangciso zakho njengeefayile zePDF. Ukuba uzoba izicwangciso zakho, ungaziskena ukuze usebenze ngokwamanani.
● Iimpawu ezahlukeneyo
● Ngenisa iifayili
● Ivumela ubungakanani obuchanekileyo
● Gcina izicwangciso njengePDF
● Vumela abanye ukuba babone izicwangciso zakho nokuba bathenga isoftware
● Akukho silingo sasimahla
● Ukufunda igophe kwezixhobo eziphambili
Funda ngakumbi malunga neCadpro kule iwebhusayithi
Okwangoku, sithethile kakhulu malunga neemveliso ezibonelela ngeempawu ze-CAD kwisoftware yokuyila ishedi. Ke, yintoni kanye kanye isoftware yeCAD?
I-CAD, ngamanye amaxesha eyandiswa iye kwi-CADD, kuyilo oluncediswa yikhompyuter kunye noyilo lwetekhnoloji. Oku kusetyenziselwa uyilo ukwenza inkqubo yesandla yokuzoba izicwangciso. Isoftware ye-CAD inokusetyenziselwa ukwenza uyilo lwe-2D okanye i-3D, kuxhomekeke kwisoftware ngqo esetyenziswayo.
Uyilo lweshedi, oku kuthetha ukuba unokwenza imodeli okanye iplani yento ofuna ukuba ishedi yakho ibonakale ngayo. Okukhona zinikwa ngakumbi ii-CAD, ezona zichaza ngakumbi uyilo lweshedi yakho. Isoftware yoyilo lwe-3D CAD ihlala ineenkcukacha ngakumbi kunogxa wayo we-2D. Oku kungenxa yezizathu esizijongileyo xa sixoxa ngesoftware yoyilo lwe-3D yasimahla.
Isoftware yoyilo lweCAD iyathandwa kuba iyenza lula inkqubo yoyilo. Ayifuni inqanaba elifanayo lokuchaneka kwimilinganiselo yoyilo loyilo. Ikwanceda abayili abangenabo ubuchule bokuzoba njengoko kufuneka babeke izimvo zabo ephepheni ngokufanelekileyo.
Ishedi encinci yokubumba
Xa uyila ishedi yendlu yakho, amathuba okuba awudingi kuthenga umrhumo wesoftware yoyilo. Emva kwayo yonke loo nto, uza kuyisebenzisela lo msebenzi mnye kuphela. Kule meko, licebo elihle ukugcina iso ngaphandle kwesoftware yasimahla.
Unokufumana iindlela ezininzi zokucwangcisa isoftware engafuni ukuba uthenge okanye ukhuphele usetyenziso. Ezi zihlala zizezona software zilula ukuzisebenzisa kuba zikukhokela kwinkqubo. Ezona zimbini zezona zikhethileyo zokukhulula zasimahla zeStudioshed kunye neShed Boss.
I-tradeoff yale ndlela elula ilula. Izixhobo kunye neempawu ozisebenzisayo kule software zibaluleke kakhulu kwaye azivumeli iinkcukacha ezininzi. Umzekelo, siphawule ngaphambili ukuba i-Studioshed ikuvumela kuphela ukuba ukhethe kuluhlu olufutshane lweempawu ezisetwe kwangaphambili.
Inqaku elinye onokufuna ukujonga kuyilo lwesoftware yasimahla yimodeli ye-3D. Ngelixa imodeli ye-2D iluncedo ekujongeni ubukhulu kunye nemilo kodwa kunzima ukufanekisela imveliso egqityiweyo.
Xa usenza imodeli ye-3D, kulula ukuyibona into oyenzayo. Ukongeza, ikwavumela ukuba ujonge amanqaku ongezelelweyo anje ngomgangatho, ukubala, kunye nokukhetha imibala. Iinkqubo ezimbini zasimahla ezibonelela ngombono we-3D yi-Shed Boss kunye ne-Fair Dinkum Sheds Designer.
Ukuba ujonge oyena mgangatho ubalaseleyo ongakhathaliyo ukuhlawula, iSketchup inemisebenzi eyomeleleyo kunye nembono ye-3D.
Isoftware yoyilo yasimahla kufuneka nayo ibe noluhlu lwezixhobo onokukhetha kuzo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uluhlu lwezinto ezibanzi ngakumbi lungcono kuyilo lwakho. Esona sibonelelo sikhulu koku kukuba unokwenza imodeli eneenkcukacha ngakumbi yeshedi yakho.
Kubaluleke kakhulu kuqoqosho ukuba izinto ezahlukeneyo ziza ngeendleko ezahlukeneyo. Ukuba uyakwazi ukwenza imodeli ebandakanya izinto ezinje ngohlobo lomgangatho kunye nokubekwa ecaleni okufunayo, uza kufumana uqikelelo lweendleko olungcono noluchanekileyo kunokuba unemilinganiselo, iingcango kunye neefestile ekubhekiswa kuzo.
Isoftware ye-Udesign 3d Shedy isoftware enye ekuvumela ukuba ubone uluhlu lwezinto ukuze wazi ukuba uza kuthenga ntoni ukugqibezela ukwakha kwakho. Kukwakho uluhlu lwezinto ezisimahla ezenziwa kwi-intanethi onokuzikhuphela. Enye indawo enjalo ifunyenwe apha .
Ndwendwela igadi yethu kunye negalari yokuhombisa umhlaba ukuze ufumane ezinye izimvo ngasemva kwendlu.
ubuhle kunye nesihlangu somtshato
uwuthumele nini amakhadi enkosi
indlela yokubopha iqhina ngenyathelo ngenyathelo